Dagaal laga cabsi qabo in uu ka bilaawdo Boosaaso iyo Deni oo hanjabaad jeediyay.
Wednesday December 01, 2021 - 10:41:06
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa walaac xooggan laga muujinayaa ka dib markii ciidammo ka tirsan maamulka Puntland oo ka amar qaata Siciid Cabdullaahi Deni lasoo dhoobey magaalada.
illaa xalay waxa la arkayay dad ka qaxaya qaar kamida xaafadaha magaalada si aan dagaalku ugu kor billaaban.
Saansaantan colaadeed ayaa ka dambaysay kadib markii dhawr cisho ka hor uu Siciid Deni xilka qaadis ku sameeyay taliyihii ciidamada PSF-ta, kadibna uu taliska ciidankaas ku sameeyay sharci darro ku tilmaamay tallaabada Dani qaaday.
u hoggaansan la’aanta ciidanka PSF-ta ee wareegtada Deni ayaa keentay in xaalku sii adkaado oo labada dhinac ay isku hub urursadaan, shacabka Boosaaso ayaa muujinaya walaac ballaaran oo ay ka qabaan dagaal ka dhaca magaaladooda.
Madaxweynaha maamulka 'Puntland' ayaa kalimad uu jeediyay si dadbadan ugu eedeeyay DF-ka in ay mas'uu ka tahay kala qeybinta ciidamada maamulkiisa isagoo ku goodiyay in uu xididda siibayo saraakiisha ciidamada kala qeybinaysa.
"Dalkani hal dawlad uun buu yeelaanayaa, dawlado isku dhex jira ma yeelanayo, dalkani hal ciidan buu yeelanaayaa ee ciidan rag leeyahay ma yeelanayo” Sidaa waxa yidhi Siciid Deni mar uu hadal ka jeedinayay madal lagu casumay.
Dadka odorosa arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in colaaddan laga dhax abuuray maamulka 'Puntland' looga gol leeyahay sidii gacanta loogu dhigi lahaa 16-ka kursi ee taal magaala xeebeedka Boosaaso.
Lama oga halka xaaladda magaalada Boosaaso ku biyo shuban doonto balse haddii xiisadani sii socoto waxaan laga baaqsan karin dagaal lagu hoobto.
Barnaamijka Taariikhda Dagaal Oogayaashii Muqdisho [Qeybta 3aad].